Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia? | Safarka Absolut
Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia? Su'aashani waa dhif iyo naadir marka laga reebo wareegyada dhaqaalaha ee gaarka ah. Tan waxaa saameyn ku leh xaqiiqda ah in dalka badweynta uu umuuqdo mid aad noogu fog waxbadanna aan ka ognahay.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in Australia leedahay a kiro qofkiiba ka sarreeya kan Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Intaa waxaa dheer, waxay ku jirtaa kaalinta labaad, ka dib Norweyee Tusmada horumarka aadanaha iyo kaalinta lixaad ee taas oo ah tayada nolosha diyaariyey majaladda 'Dhaqaalayahan'. Waxaas oo dhan, ogaanshaha kuwa ugu waaweyn shirkadaha Australiya waa muhiim adduunweynaha maanta jira.
1 Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia? Laga soo bilaabo macdanta ilaa bangiyada ilaa daryeelka caafimaadka
1.1 Bilyan BHP
1.2 Bangiga Dawlada Dhexe ee Australia
1.3 Kooxda Rio Tinto
1.4 Kooxda Woolworths
1.5 Shirkadda Westpac Banking
1.6 Kooxda Macquarie
1.7 Westfarmers, oo ah tafaariiqle ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Australia
1.8 Shirkadda Telstra Corporation Limited
1.9 Kooxda Transurban
1.10 Amcor Limited, baakadaha si loo abuuro mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Australia
Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia? Laga soo bilaabo macdanta ilaa bangiyada ilaa daryeelka caafimaadka
Shirkadaha ugu waaweyn ee Australiya waxay ku fidsan yihiin qeybaha kala duwan ee dhaqaalaha, laakiin dhammaantood waxay wadaagaan awood aad u weyn dhinacyada kala duwan ee waxqabadkooda. Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah shirkadahan.
Waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka. Waxay ku dhalatay 2001 isku biirkii Ingriiska Billion iyo Australiyaanka Milkiilaha Hill Broken. Xarunteedu waxay ku taal Melbourne, laakiin waxay leedahay wufuud ka socota shan iyo labaatan dal, oo ay ka soo saarto macdanta sida birta, dheeman, nikkel iyo xitaa bauxite.
Sanadkii la soo dhaafey waxay shaacisay dakhli soo jiray 46 hal bilyan oo doolar, oo leh faa iidada ugu yar wax ka yar kala bar, kudhowaad 20 bilyan oo doolar.
Qeyb ka mid ah Bangiga Dhexe ee Australia
Bangiga Dawlada Dhexe ee Australia
Sida aad ka arki karto magaceeda, waa bangi ka shaqeeya, ma aha oo keliya waddanka badweynta, laakiin sidoo kale dhammaan dadka kale ee aagga, iyo sidoo kale Asia iyo xitaa gudaha Mareykanka y Great Britain.
Tartan adag oo lala galo bangiga kale ee waaweyn ee dalka ka jira, ayaa Muwaadin Australiyaan ah, Barwaaqo-sooranku way ka weyn tahay tan raasamaal ahaan. Sanadkii la soo dhaafey waxay shaacisay dakhli soo jiray 30 bilyan oo doolarka Australia, taasi waa, ku dhowaad 45 bilyan oo euro.
Kooxda Rio Tinto
Waxaan dib ugu laabaneynaa howlaha macdanta si aan kaaga warranno shirkaddan sidoo kale ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Australia. Xarunteedu wali waxay ku taal London, laakiin waxay ka dhalatay midowgii Ingiriiska Rio Tinto-Zinc Corporation, oo leh miinooyin ku yaal Spain, iyo Australia Conzinc Rio Tinto.
Es shirkadda ugu weyn adduunka ee qodeysa dhuxusha dhowr sano ka horna waxay isku dayday inay iibsato BHP Billion, oo aan hadda kuu sheegnay. Si kastaba ha noqotee, hawlgalka lama dhammaystirin. Sannadkii 2020, kooxda Río Tinto Group ayaa soo warisay dakhliyada ku dhowaad US $ 45 bilyan.
Waxay ku fadhidaa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee soocista shirkadaha biotechnology. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah kuwa tallaalka, oo maanta la mariyo, laakiin sidoo kale alaabooyin ka soo jeeda dhiigga iyo unugyada unugyada kale. Waxaa la aasaasay sanadkii 1916-kii iyada oo ay sameysay dowladda Australia lafteeda, laakiin waxaa lagu wareejiyay 1994.
Waxaa ka shaqeeya 25 oo qof sanadkii horena dakhli ayaa soo galay ku dhowaad 10 bilyan oo doolar kuwaas oo ku dhowaad laba kun ay ahaayeen faa'iidooyin. Marka laga hadlayo suuqgeynta suuqgeeda, waxay leedahay qiimo dhan 145 bilyan oo doolar.
Xafiiska Bangiga Westpac
Shirkadda Westpac Banking
Mar labaad bangi ayaa ka muuqda liiskan ka jawaaba kuwaas oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee Australia. La aasaasay 1817, Western Pacific (oo macnaheedu yahay Westpac) waxay u heellan tahay labadaba dhaqameed iyo ganacsi iyo bangiyada ganacsiga, maaraynta hantida iyo bangiyada hay'adaha.
Waxay kaloo laamo ku leedahay New Zealand. Marka laga hadlayo qiimaha ay ku fadhido suuqa, waxay ku dhowdahay 90 bilyan oo doolarka Australia. Dakhligaaga guud ee sanadka 2020 wuxuu ahaa ku dhowaad 22 bilyan macaashkuna wuxuu ahaa ku dhowaad afar bilyan oo doolarka Australia. Shaqaalaheeda, waxay leedahay ilaa 40 kun.
Hawlaha shirkaddani sidoo kale waxay ku xiran tahay bangiyada, in kasta oo ay kiisa tahay tan maalgelin. Waxay joogitaan ku leedahay 25 waddan waxayna leedahay in kabadan 14 kun oo shaqaale ah. Waa maareeyaha hantida ugu weyn ee meeraha, maaddaama ay maamusho ku dhowaad 495 bilyan oo doollar hantida noocan ah.
Ka-faa'iideysiga suuqgeedu waa ku dhowaad 53 bilyan, sannadka 2020-na, waa la caddeeyay ku dhowaad saddex bilyan oo doolar oo faa'iido ah. Awood badan ayay leedahay shirkaddan oo warbaahinta Australia ay ugu magac dartay "Warshadda Milyaneerka."
Westfarmers, oo ah tafaariiqle ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Australia
Haddii shirkadihii hore ay u heellan yihiin macdanta, bangiyada iyo arrimaha caafimaadka, kani wuxuu sameeyaa by dukaamada. Gaar ahaan, waxay iibisaa alaabada kiimikada iyo warshadaha, bacriminta iyo, tan iyo markii ay heshay kooxda Coles, sidoo kale cuntada.
Supermarket-ka Coles Group, oo ah shirkad hoosaad ka ah Westfarmers
Waxaa la aasaasay sanadkii 1914 iskaashato beeraley ah, waxay hada shaqaalaysiisaa in kabadan boqol kun oo qof. Sanadkii 2020 waxay lahayd dakhli guud oo ah ku dhowaad 31 bilyan oo doolar, iyadoo qiyaastii laga helayo ku dhowaad laba.
Shirkadda Telstra Corporation Limited
Mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Australiya kama maqnaan karin liistada shirkadaha u heellan isgaarsiinta. Gaar ahaan, waxay iibisaa taleefanno go'an iyo mobilo, Internet iyo bixinta adeegyada telefishanka. Waa tan ugu muhiimsan kuwa ka shaqeeya waddanka ku yaal badweynta, iyada oo suuqgeedu yahay ku dhowaad 45 bilyan oo doolar.
Sannadka 2019 wuxuu lahaa qiyaastii 26 oo shaqaale ah iyo dakhligiisa sanadlaha ah waa ilaa 30 bilyan oo doolar faa iidada saafiga ah ee ku dhow afar.
Australia waa wadan aad u baaxad weyn, oo leh in kabadan todobo milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran. Sidaa darteed, layaab kuguma noqon doonto in shirkad heegan u ah dhismaha iyo shaqaynta jidadka waaweyn Waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn dalka.
Intaa waxaa dheer, Transurban sidoo kale way ka shaqaysaa Kanada y Mareykanka. Ka-faa'iideysiga suuqgeedu waa qiyaastii 43 bilyan oo doolar waxaana la abuuray 1996. Hadda, waxay leedahay qiyaastii 1500 oo shaqaale ah iyo dakhli guud waa ilaa 3 bilyan oo doolar iyadoo macaashkiisu dhan yahay ku dhowaad kun.
Bakhaarka Telefoonka Telstra
Amcor Limited, baakadaha si loo abuuro mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Australia
Shirkaddan sidoo kale waxay u heellan tahay gaadiidka, in kasta oo ay tahay qaybta baakadaha. Waxay joogtaa afartan dal, oo ay ka mid yihiin Espana, oo waxay leedahay qiimo suuq ku dhow $ 27 bilyan. Waxay leedahay qiyaastii 35 oo shaqaale ah iyo dakhli guud oo ka soo gala ku dhowaad 10 bilyan oo doolar, halka macaashka saafiga ahi ku dhow yahay 1500 milyan.
Gabagabadii, hadaad isweydiineysay kuwaas oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee AustraliaWaxaad horey u aragtay inay ka tirsan yihiin, aasaas ahaan, qaybaha sida macdanta, bangiyada iyo gaadiidka. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha kale ee waaweyn, sida CLS Xaddidan, waxay ku hawlan yihiin soo saarista alaabada fayadhowrka ama, sida Kooxda Goodman, adduunka ganacsiga guryaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxay yihiin shirkadaha ugu waaweyn Australia?
Maalinta Hooyada ee Ruushka